कालिकोटको छाप्रेमा भिषण पहिरो – Karnalipati
कालिकोटको छाप्रेमा भिषण पहिरो
कर्णाल‍ीपाटी । १० भाद्र २०७६, मंगलवार मा प्रकाशित
कालीकोटः जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका वडा नं. ७ छाप्रेमा भिषण पहिरो गएको छ । गएराति अबिरल बर्षासँगै गाँउ माथिबाट आएको पहिरो गाँउमा पसेपछि स्थानिय नागरिकहरुको भागा भाग भएको छ । तिलागुफा नगरपालिकाको वडा नं. ६, ७ र ८ का तीन वटा बस्तीहरु पहिरोको जोखिममा परेका छन् ।
तिलागुफा नगरपालिका प्रमूख रतनबहादुर शाहीले पहिरोका कारण छाप्रे, डाँडको बस्ती बिस्थापित भएको जानकारी दिए । उनले भने, पहिरो अहिले पनि बगिरहेका छ । राती गाँउमा पहिरो पस्दा भागा भाग भयो । गाँउमा पहिरो पसेपनि मानविय क्षेती भने भएन । डाँढ गाँउका दुई घरमा पहिरो नै पसेको छ । टाकुल्लाको दुई कोठे घर पुरीएको छ । पहिरोले कर्णाली राजमार्ग अन्गरगतको सुर्खेत जुम्ला सडकखण्ड पनि अबरुद्ध भएको छ । कर्णाली राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधनहरु बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् । जुम्ला, मुगुबाट सुर्खेत तिर र सुर्खेतबाट जुम्ला मुगु तिर जाने सवारी साधन तथा यात्रुहरु बीच बाटोमै रोकिएका छन् ।
पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा उद्धारका लागि जिल्लाका तीन वटै सुरक्षा निकाय खटिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका प्रमूख डिएसपी श्यामबाबु ओलीयाको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशष्त्र प्रहरीका डिएसपी दिलप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा सशष्त्र प्रहरी र नेपाली सेना पहिरो स्थलमा खटिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका प्रमूख डिएसपी श्यामबाबु ओलीयाले आफुहरुले पहिरोको जोखिममा परेका परिवारहरुको तथ्याँक संकलन, उनीहरुको बसोबासका लागि नगरपालिकासँग समन्वय गरिरहेको बताए । उनले भने, पहिरो रोकिएको छैन् । छाप्रेका २५ घरहरु तत्काल बिस्थापित हुने अवस्थामा छन् । जोखिममा रहेका परिवारको घरमा रहेको सामानहरु सुरक्षित ठाँउ तिर लिने कार्य भईरहेको छ ।